यी म कहिल्यै आनन्द उठाएका सबै भन्दा राम्रो स्थानीय व्यञ्जन मा मेरो musings छन्, समयमा मेरो अस्ट्रिया मा रहन. म मा थियो गर्मी 2016 एउटा सानो आकारको स्थानीय एनजीओ मा मेरो4महिना इंटर्नशिप लागि. को इंटर्नशिप अनुभव त ठूलो थियो, म प्रतिभाशाली युवा व्यक्तिहरूलाई भेट्न पायो कि, जसलाई म अहिले सम्म अप सम्पर्कमा रहन, र म सिंगापुर मा मेरो वर्तमान भूमिका मेरो इंटर्नशिप मा सिकाएका कौशल लागू गर्न सक्षम छन्.
यो व्यञ्जन को मूल अत्यधिक debatable छ - केही यो Swabian क्षेत्रबाट जयजयकार तर्क, र केही अरूलाई Kasespatzle को पुरानो रेकर्ड प्रारम्भिक 17 औं सताब्दी मा हात-लिखित Cookbook फिर्ता मिति कि. नाम एक खानको आकारको टुक्रा मा doughs सानना को आन्दोलन बाट आउन सक्छ, तर त्यहाँ कुनै ऐतिहासिक प्रमाण छ. आधुनिक समयमा, यो पकवान को एक भाग जानिन्छ सान्त्वना खाना एक पछि लामो पदयात्रा को कुरकुरा अल्पाइन एयर मा. अन्यथा, तपाईं भन्दा स्थानीय रेस्टुरेन्ट मा पाउन सक्नुहुन्छ. जर्मन भाषा बोल्ने देशहरूमा धेरै भागहरु मा सेवा, को Vorarlberg Kasespatzle (Vorarlberg अस्ट्रिया को पश्चिम मा छ) अत्यधिक अस्ट्रिया मा लोकप्रिय छ. को पास्ता राम्रो पीठो देखि बनेको छ, नाम मूल उल्लेख रूपमा, ग्रील्ड पनीर मा sunk सानो बाइट्स मा समाप्त. बनावट साँच्चै स्वर्गीय छ, मुख मा पग्लिने. तला प्याज र वसन्त प्याज यो मलाईदार स्वर्गमा पकवान मसला थप्न (तिनीहरूले वास्तवमा एक राम्रो काम!).
मलाई फिर्ता अस्ट्रिया लाग्न - म सधैं जब म कैंडी साम्राज्य आउटलेटहरू मा यो पत्ता लगाउन यस्तो उद्गार व्यक्त (अन्तर्राष्ट्रिय confectioneries लागि सिंगापुर गरेको प्रमुख आयोतकों, यो म शैलीमा प्रस्तुत उत्पादनहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ मात्र स्थान हो). तरिका एक परम्परागत अष्ट्रीया परिवार व्यापार लेट 19 औं सताब्दी मा स्थापित भएको थियो कि स्थापना छ. संग सख्त गुणस्तर नियन्त्रण सशस्त्र, ध्यान दिएर चयन सामाग्री र प्रतिष्ठित pinkish प्याकेजहरू, यो ब्रान्ड अस्ट्रिया मा एक हस्ताक्षर स्मारिका भएकोमा famed छ. Mannerschnitten (हेजलनट चकलेट वेफर्स को एक प्याकेट) छ हुनुपर्छ-प्रयास; छैन त मीठो न त स्वाद नभएको, यो कहिल्यै मेरो प्यारो दाँत प्रभावित असफल देखिन्छ. को हेजलनट सधैं भियना मेरो शानदार दिन फिर्ता मलाई TRANSPORTS. अहिले म सधैं एक खाजा समय शैलीमा प्रस्तुत चकलेट वेफर्स प्रयास गर्नुहोस् वा म यसको लागि जब तरस छु. म शैलीमा प्रस्तुत मध्य युरोप मात्र मा पसलहरूमा उपलब्ध छ कि विचार. तथापि, म स्पष्ट Mannar रूपमा गलत छु मिठाई उपलब्ध छन् सिंगापुर मा पनि.
Schlutzkrapfen (आधा चन्द्र पास्ता ricotta पनीर र पालुङ्गो भरिएको)
म यसको ल्यान्डमार्क लागि जानिन्छ जो पश्चिमी अस्ट्रिया मा नाइस मा अन्वेषण थियो जब यो पकवान सामना, सुनौलो रूफ. म एक क्याफे मा hopped र शाकाहारी कुरा खोज्दै थियो. मेनु अप पढ्दै, तरकारी fillings संग पास्ता मेरो लागि राम्रो सुनिन्थ्यो, त्यसैले म यो आदेश. म कटा तरकारी संग लामो पास्ता सोच थियो, तर यो भित्रका केहि संग पास्ता चपटे थियो र एक छर्कनु संग garnished थियो बाहिर गरिएका पनीर र कटा वसन्त प्याज. को पग्लियो घिउ मेरो मुखमा यो पकवान चिप्लो बनाउन एक टन काम. थप महत्वपूर्ण, म अझै पनि एक महिला बेरा मेरो तालिका आउने र यो राम्रो थियो भने सोधेर सम्झना. म यो यति स्वादिष्ट थियो उनको भन्नुभयो - म त ग्राहकहरु 'सन्तुष्टि बारे उनको मायालु हृदय छोयो थियो र मेरो हृदय न्यानो भरिएको थियो. दक्षिण Tirol उत्पत्ति (अब इटाली को भाग), यसलाई साथै छिमेकी Tirol मा एक साधारण खाना prevalently छ. श्रम को एक ठूलो रकम यो गर्न त सजिलो देखिन्छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद यो बनाउन मुछिनुभएको छ.
एक भियना मा "खाने गर्नुपर्छ" को, अस्ट्रिया. यो Habsburg अवधि को अन्त मा सिर्जना गर्नुभएको साँच्चै स्थानीय विशेषता छ. तपाईं यस केक पछि एक निरर्थक तर महत्त्वपूर्ण लडाई थियो थाहा? दुई विनीज केक दिग्गज, Demel र Sacher पनि एक हास्यास्पद अदालत मामला गर्न नेतृत्व एक लामो समय को लागि एक "मीठो" युद्ध अवस्थामा भएको थियो; जो आफूलाई एक "मूल Sachertorte" कल गर्नुपर्छ? कति खूबानी गर्न प्रयोग गर्नुपर्छ केक परिपूर्ण? लागि उपयुक्त तापमान के हो तरल चकलेट? गम्भीर, तिनीहरूले राज्य अदालत मा सबै यो तर्क, छैन पकाउने वर्ग वा क्रमबद्ध कुनै पनि. अन्त मा, Sacher इतिहास वाहेक युद्धमा जित्यो र अब आफूलाई हुनुको मा prides "एक मूल Sacher torte।", म व्यक्तिगत Demel एक उपयुक्त यसलाई Sacher को भन्दा बढी गुलियो र फ्लफी छ रूपमा. Sacher "Sacher torte" र Demel समकक्ष कस्तो भिन्नता छ? पूर्व अलिकति उच्च मूल्य र थप केक तहहरू पायो र केक भित्र खूबानी वृद्धि. उत्तरार्द्ध एक बिट सस्ता र धेरै creamier छ.
भियना गरेको cosmopolitanism एक प्रतिनिधि. भियना मा, त्यहाँ "विदेशी" 'लगभग सबै दुनिया भर देखि आ सामाग्री बिक्री बजार को भार हो. तपाईं रूस देखि व्यञ्जनहरु र सामाग्री पाउन सक्नुहुन्छ, टर्की, जापान, भारत र थप. मूल मध्य पूर्व देखि, यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाइने विनीज औंला खाना विकल्प मध्ये एक छ. मसले छोला बनाइएका, को फालाफेल बलमा फालाफेल को रूप मा खाएको गर्न सकिन्छ wraps वा सपाट रोटी साथमा जाने वस्तु. या त बाटो, फालाफेल कट को एक गुच्छा आउँछ तरकारी र yogurts सारा जई र्याप वा द्वारा पूछे जाने रोटी भित्र. सिद्ध शाकाहारी स्टेपल हुनुको, यो तिनीहरूले म मात्र खाना विकल्प एक शाकाहारी रूपमा सीमित छन् थाह मेरो साथीहरूले मलाई प्रस्ताव गर्न प्रयोग पकवान छ. त्यहाँ फालाफेल को एक टन सबै भियना भन्दा stalls छ, तर मेरो मनपर्ने फालाफेल अडान Brunnenmarkt मा छ. एक पागल सस्तो बजार रूपमा ज्ञात जहाँ सबैको अविश्वसनीय कम मूल्यहरु मा सामाग्री को एक व्यापक एरे प्राप्त गर्न सक्छन्, यो बजार पनि USD भन्दा कम लागत कि फालाफेल र्याप को एक भाग प्रदान गर्दछ 1 या त, बनाउने यो शायद सहरमा सस्ता. भन्न अनावश्यक, च्यादर को स्वाद कुनै पनि अन्य विनीज बजार मा रूपमा राम्रो छ.
मेरो मनपर्ने अष्ट्रीया मिठाई! कोमलता केक र स्याउ स्लाइस को एक जोडी र किसमिस एक गुच्छा जादू काम गर्दछ र मलाई स्वर्गीय जस्तै महसुस बनाउन. को पौराणिक कथा अस्ट्रिया मध्य पूर्व देखि मिठाई BAKLAVA मिठाई आयात कि यो छ. BAKLAVA फ्लफी केक र चिनी र सिरप बनेको छ, अर्थ यो सिरप मा केक डूब गर्नुपर्छ. अझ fruity पक्षमा रहेको, Apfelstrudel छ Baklava- को अनुवादित संस्करण यस अष्ट्रीया व्यञ्जन राम्रो उदाहरण हो, तिनीहरूलाई धेरै तिनीहरूले बाट आयात गरिएको थियो जो पूर्व अष्ट्रीया साम्राज्य क्षेत्रबाट एक ट्रेस ट्र्याक गर्न सक्नुहुन्छ रूपमा. त्यहाँ अनलाइन असंख्य Apfelstrudel व्यञ्जनहरु, र नुस्खा लेखक केही साझेदारी गर्न पर्याप्त उदार छन् आफ्नो परिवार दुनिया नुस्खा. तथापि, विश्वव्यापी नियम आटा त पातलो को केक महाराज यो मार्फत एक अखबार पढ्न सक्नुहुन्छ हुनुपर्छ भन्ने छ.